University of Munich - Higher Education na European mahadum
University of Munich Nkọwa
tọrọ ntọala : 1472
Echefukwala atụle University of Munich
Idebanye aha na University of Munich
Ludwig Maximilians University of Munich na-a ọha research mahadum dị na Munich, Germany.
The University of Munich bụ n'etiti Germany kasị ochie mahadum. Guzobere na Ingolstadt na 1472 site Duke Ludwig IX nke Bavaria-Landshut, mahadum kpaliri na 1800 ka Landshut Eze Maximilian m nke Bavaria mgbe Ingolstadt yiri egwu na French, tupu e kwagara ya n'oge a na ọnọdụ na Munich na 1826 Eze Ludwig m nke Bavaria. na 1802, mahadum e eze aha ya bụ Ludwig-Maximilians-Universität Eze Maximilian m nke Bavaria na ya nakwa dị ka mahadum mbụ nchoputa nsọpụrụ.
The University of Munich nwere, karịsịa ebe ọ bụ na narị afọ nke 19, A na-ewere dị ka otu n'ime Germany si dị ka mma dị ka otu n'ime Europe kasị mahadum; na 34 Nobel Laureates jikọtara ya na mahadum, ọ kwubara otutu nke 13 n'ụwa nile site ọnụ ọgụgụ nke Nobel Laureates. Ụfọdụ n'ime ihe ndị Wilhelm Röntgen, Max Planck, Werner Heisenberg, Otto Hahn na Thomas Mann. Pope Benedict XVIwas nwekwara a na-amụrụ na prọfesọ na mahadum. The LMU nso nso a na edunye aha nke “J.Randall mahadum” n'okpuru German Universities Ọkasị Initiative.
LMU bụ ugbu a na nke abụọ kasị ukwuu na mahadum dị na Germany na okwu nke na-amụrụ bi; na oyi ọkara afọ agụmakwụkwọ nke 2013/2014, mahadum nwere ngụkọta nke 50,542 matriculated ụmụ akwụkwọ. n'ime ndị a, 8,719 ndị freshmen mgbe mba ụmụ akwụkwọ totaled 7,403 ma ọ bụ fọrọ nke nta 15% nke na-amụrụ bi. Ma operating mmefu ego, mahadum ndia na 2013 a ngụkọta nke 571.3 nde Euro iri na ato ke ego na-enweghị ọgwụ mahadum; na ọgwụ mahadum, mahadum nwere ngụkọta ego amounting na ihe dị ka 1.5 ijeri Euro.
Nweta ihe echiche nke ndị anyị bụ – mahadum na obi nke Munich. Ludwig-Maximilians-Universität München bụ otu n'ime ndị na-eduga nnyocha mahadum Europe, na a ihe karịrị 500 afọ ogologo omenala. The University-agba mbọ ka ndị kasị elu na mba ụkpụrụ nke kacha mma na-eme nnyocha ma na-ezi.
Dị ka otu n'ime Europe si eduga nnyocha mahadum, LMU anya azụ 500 afọ ọdịnala na-atụ ihe ịma aka na ibu ọrụ n'ihu. Ya mma na-ezi na nnyocha na-agbakụ a dịgasị iche iche nke ubi-si Humanities na omenala ọmụmụ site n'iwu, akụnụba na-elekọta mmadụ na sayensị na nkà ọgwụ na eke na sayensị. Onye na-ufiop interdisciplinary-abịaru nso-akpata ihe ọhụrụ mere oké egwu ka anyị zuru ụwa ọnụ ga-eme n'ọdịnihu.
LMU si ngalaba-ma ha bụ ndị n'oge ọrụ professors ma ọ bụ mba a ma ama na-agbata n'ọsọ-meriri-etolite ntọ-ala nke University si na-akwanyere ùgwù ndekọ na research. ha nka, raara onwe, na creativity underpin University ịga nke ọma na Germany dum Ọkasị Initiative, a mpi na nke LMU meriwo ndị kasị ibu ego nke ego enyem support ọdịda ka otu alụmdi. Ndị a akụ na-eji na-eme ka anyị na-akọrọ ịchụso ihe ọmụma, a mgbe niile evolving usoro.
LMU bụ n'ụlọ ka ụmụ akwụkwọ si n'akụkụ nile nke Germany na ihe karịrị 130 mba gburugburu ụwa. Ha-erite uru site University nke iche ọtụtụ ọmụmụ omume na ya siri ike na-elekwasị anya na nyocha. Mgbe nile nkebi nke agụmakwụkwọ ọzụzụ ayi kowara na njikọ n'etiti nnyocha na N'ezie ọdịnaya. Anyị na ụmụ akwụkwọ ele ọmụmụ ha dị ka a rata ka a na-akwụghachi ụgwọ ọrụ, bụghị dịghị ihe ọzọ n'ihi na Munich bụ otu n'ime Germany bụ isi na emmepe maka technology na media.
Ọmụmụ di iche iche-eto nke ọma na gburugburu ebe na-agụnye mmekọrịta mmadụ na ibe n'akụkụ a dị oké egwu, mmata nke ụkpụrụ na akụkọ ihe mere eme. Nke a na-agụnye Munich Nlereanya nke Weisse Rose, -amụrụ dabeere na-eguzogide otu na-emegide Nazism.
Mgbe ị na-LMU, ị na-isonyere a obodo raara nye eme ihe ha talent, ọchịchọ ịmata, na ohere. M ma na-asọpụrụ na wedara ịbụ akụkụ nke a obodo.
president, Ludwig Maximilian University of Munich
Faculty maka History na Arts
Faculty of Philosophy, Philosophy of Science na Study of Religion
Faculty of Psychology na Educational Sciences
Faculty maka Study of Culture
Faculty maka Asụsụ na Literatures
Faculty of Mathematics, Computer Science na Statistics
Faculty of Chemistry na Pharmacy
Faculty of Geosciences na Environmental Sciences
The mahadum e tọrọ ntọala na popu ihu ọma na 1472 dị ka University of Ingolstadt (ntọala nri nke Louis IX na Rich), na ikike iche nke nkà ihe ọmụma, nkà mmụta ọgwụ, jurisprudence na nkà mmụta okpukpe. Ya mbụ Rector bụ Christopher Mendel nke Steinfels, bụ onye mesịrị ghọọ bishop nke Chiemsee.
Na oge nke German madu, mahadum ọmụmụ gụnyere aha dị ka Conrad Celtes na Petrus Apianus. The ọkà mmụta okpukpe Johann Eck kụzikwaara na mahadum. site 1549 ka 1773, na mahadum e mmetụta ndị Jesuit na ghọrọ otu n'ime ógbè ndị Ndozigharị. The Jesuit Petrus Canisius jere ozi dị ka Rector nke mahadum.
Ná ngwụsị nke narị afọ nke 18, na mahadum e mmetụta Enlightenment, nke mere ka a siri ike mesiri ike na eke sayensị.
na 1800, na Prince-Elector Maximilianv IV Joseph (na mgbe e mesịrị Maximilian m, King of Bavaria) kpaliri mahadum ka Landshut, n'ihi French awakpo na egwu Ingolstadt n'oge Napoleonic Wars. na 1802, na mahadum e renamed na Ludwig Maximilian University na nsọpụrụ nke ya abụọ founders, Louis IX, Duke nke Bavaria na Maximilian m, Elector nke Bavaria. The Minister nke Education, Maximilian Montgelas, butere a ọnụ ọgụgụ nke mgbanwe nke nāchọ ka ime nke ugbua na kama mgbanwe na Jesuit-enwe mmetụta na mahadum. na 1826, ọ kwagara Munich, bụ isi obodo nke Alaeze nke Bavaria. The mahadum e nsogbu ke Old Academy ruo mgbe a ọhụrụ ụlọ ke Ludwigstraße e dechara. The obodo nwetụrụ oké egwu nke ego nke Protestant professors Maximilian na mgbe e mesịrị Ludwig m kpọrọ Munich. Ha na kpọrọ ndị “Northern ọkụ” (Northern ọkụ) na karịsịa dibịa Johann Nepomuk von Ringseis nnọọ iwe banyere ha.
Na nkera nke abụọ nke narị afọ nke 19, mahadum bilie a ma ama na European ọkà mmụta sayensị, adọta ọtụtụ nke ụwa na-eduga ndị ọkà mmụta sayensị. Ọ bụ a oge nke oké mmụba. site 1903, inyom a na-ekwe na-amụ na Bavarian mahadum, na site 1918, nne nkezi nke ụmụ akwụkwọ na LMU ruru 18%. na 1918, Adele Hartmann ghọrọ nwaanyị mbụ na Germany irite theHabilitation (elu doctorate), na LMU.
N'oge Weimar Republic, mahadum nọ na-otu nke ụwa na-eduga na mahadum, na professors dị ka Wilhelm Röntgen,Wilhelm Wien, Richard Willstätter, Arnold Sommerfeld na Ferdinand Sauerbruch.
The mahadum anọgidewo na-abụ otu n'ime ndị na-eduga na mahadum nke West Germany n'oge Agha Nzuzo na na post-reunification oge. Ke mbubreyo 1960, mahadum ekedi idaha ngagharị iwe site buu ụmụ akwụkwọ.
Taa University of Munich bụ akụkụ nke 24 Right Research Centers kwụrụ ụgwọ site German Research Foundation (DFG) na bụ usu mahadum 13 nke ha. Ọ na-agha 12 DFG Research Ọzụzụ Otu dị iche iche na atọ mba doctorate omume dị ka akụkụ nke J.Randall Network of Bavaria. Ọ na-adọta ihe ọzọ 120 nde euro kwa afọ na-abụghị ego na bụ intensively idem ke mba na mba ego, atumatu.
LMU Munich nwere a dịgasị iche iche nke ogo mmemme, na 150 na-achị dị na ọtụtụ n'ịgwa. 15% nke 45,000 ụmụ akwụkwọ ndị na-aga na mahadum-abịa si mba ọzọ.
na 2005, Germany steti na govamenti etiti ulo oru German Universities Excellence Initiative, a zoo n'etiti ya mahadum. Na a ngụkọta nke 1.9 ijeri euro, 75 percent nke nke na-abịa site na gọọmenti etiti steeti, ya architects nzube putara ighe akwalite n'elu-larịị research andscholarship. The ego e nyere karịa 30 research mahadum Germany.
The ụzọ ga Fund atọ oru ngo na-agba mbọ ebe: gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ na-akwalite ọzọ ọgbọ nke ndị ọkà mmụta, ụyọkọ nke kacha mma na-akwalite ọnwụ ihu nnyocha na “n'ọdịnihu echiche” maka oru ngo dabeere mgbasa nke agụmakwụkwọ kacha mma na mahadum dị ka a dum. Iji ruo eru n'ihi na nke a nke atọ ebe, a mahadum nwere dịkarịa ala otu mba dị agụmakwụkwọ center nke kacha mma na a ọhụrụ akwụkwọ.
Mgbe mbụ gburugburu nke selections, LMU Munich a kpọrọ edo ngwa maka niile atọ ego edoghi: Ọ banyere mpi amụma n'ihi na abụọ gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ na anọ ụyọkọ nke kacha mma.
Na Fraịdee 13 October 2006, a-acha anụnụ anụnụ-rịbọn panel mara ọkwa na ya pụta nke Germany-obosara Excellence Initiative maka ịkwalite n'elu mahadum nnyocha na-akụziri. The panel, esịnede nke German Research Foundation na German Science Council, kpebiri na LMU Munich ga-enweta ego maka niile atọ na ebe kpuchie site Initiative: otu akwụkwọ, atọ “mma ụyọkọ” na n'ozuzu ego maka mahadum “n'ọdịnihu echiche”.
Ị chọrọ atụle University of Munich ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
University of Munich na Map
photos: University of Munich ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke University of Munich.